Zvemotokari waya Sunga vatengesi uye fekitori - China Zvemotokari Waya Sunga Vagadziri
Chigadzirwa Zvidimbu Model Nhamba: sensor tambo-06 Zita reBrand: Olink Mavambo: China (mainland) Maketani emaketani anowanzo gadzirwa zvinoenderana nejometri uye zvemagetsi zvinodiwa. Dhayagiramu inozopihwa (kungave pabepa kana pane tariso) yekugadzirira gungano uye gungano. Tambo idzi dzinotanga dzakatemwa kusvika parefu hwaunoda, kazhinji dzichishandisa muchina wakakosha wekucheka waya. Tambo dzinogona zvakare kudhindwa nemuchina wakasarudzika panguva yekucheka kana pane mumwe mushini. Mushure meizvi, iyo e ...
Auto waya sunga, OEMODM waya simbi yeakasarudzika mota
Chigadzirwa Zvidimbu Model Nhamba: sensor tambo-06 Zita reBrand: Olink Mavambo: China (mainland) Maketani emaketani anowanzo gadzirwa zvinoenderana nejometri uye zvemagetsi zvinodiwa. Dhayagiramu inozopihwa (kungave pabepa kana pane tariso) yekugadzirira gungano uye gungano. Tambo idzi dzinotanga dzakatemwa kusvika parefu hwaunoda, kazhinji dzichishandisa muchina wakakosha wekucheka waya. Tambo dzinogona zvakare kudhindwa nemuchina wakasarudzika panguva yekucheka kana pane mumwe mushini. Mushure meizvi, iyo ...
Waya Sunga Kune UTV Mota
Tsanangudzo ISO IATF yakasimbiswa fekitori Industrial uye Yekushandisa chikumbiro Wiring Sunga Model Nhamba: mota tambo sunga 04 Nzvimbo Yekutanga: Olink Kugona: 5.2USD MOQ: 120 × 140 × 25 Masentimita Zvigadzirwa SGS IATF16949, CE chitupa tambo Pulasitiki goko: nylon PA66 Terminal: yakanamirwa mhangura Waya: mhangura musimboti, PVC bhachi Rated tembiricha: -25 kusvika + 85 ° C Waya sunga: PVC, rabha, silicone Inoshanda frequency: 50 / 60Hz Inoshanda ikozvino: 3A Inoshanda voltage: 250V AC / DC Flammabilit ...
OBD Waya Sunga
Nongedzo Yakakwira mhando Yehunyanzvi tambo tambo tambo yeKereke, OBD tambo yegungano. Model Nhamba: mota tambo sunga 18 Nzvimbo Yekutanga: Olink Kugona: 3 USD MOQ: 80 × 100 × 19 Masentimita Zvigadzirwa 1) OBD II kurudyi kona murume kune mukadzi Cable 2) Kureba = 0.4m 3) Kunyorera: mota data kufambisa 4) zvinhu: Chinongedzo: goridhe yakafukidzwa, nickel yakafukidzwa Conductor: yakachena mhangura AWG: 24 # / 26 # / 28 # Shield: foil uye spiral Jacket: PVC, Nhema Voltage: 12V / 24V 5) Kuedza: 100% kuyedza 6) Certification: ROHS 7) Hondo ...
Motorcysle Waya Sungai Cable Assembly
Midhudhudhu Waya Sunga Cable Assembly
Yekutaura waya harenss yemotokari Model Nhamba: waya harenss yemotokari Nzvimbo YeKutanga: waya harenss yemotokari Kugona: waya harenss yemotokari MOQ: waya harenss yemotokari Wire Sungai Kuyedza Kuyedza mashandiro emagetsi kwetambo kana tambo tambo inogona kuitwa neiyo rubatsiro rwebhodhi rekuyedza. Bhodhi rekuyedza rakafanorongedzwa neanodiwa emagetsi maficha, uye iyo tambo yakapedzwa inogona kuvharirwa mubhodhi rekuyedza uye kuyedzwa zvakasiyana kana muamu ...
LVDS Vhidhiyo tambo tambo